Beesha Caalamka oo Arrimaha Somaliya ay kaga Adkaadeen Fahad iyo Farmajo | SMC
Home WARARKA MAANTA Beesha Caalamka oo Arrimaha Somaliya ay kaga Adkaadeen Fahad iyo Farmajo
Beesha Caalamka oo Arrimaha Somaliya ay kaga Adkaadeen Fahad iyo Farmajo
Ilaa muddo Somaliya waxaa taakuleyneysay beesha Caalamka oo waqti iyo hantibda kaga baxday, mana laga sugayn inay ogolaan karto inuu dalka dib u burburo ama uu gacanta u galo ruux Kaliteliye ah oo marsiiya jiddkii ay ku burburi lahayd. Dad badan ayaa is weydiinaya ma waxaa laga adkaaday beesha caalamka markii la eryey Mr Haysom Wakiilkii Xogahayaha Guud ee QM Somaliya u qaabilsanaa Janayo 2019, laguna khasabay inay soo badasho, oo waxay goosteen wixii intaa ka dambeeyey ka aamusa dowladdaan NN yeysan dalka oo dhan idin ka eryine?
Marka diblomasiyadda la eego xaaladaha intaas waa ka culus yihiin. Waa dhab in marka loo eego dadka Soomaliyeed in beesha caalamka ay gashay khaldaad taariikhi ah ha aqbasho ama yaaney aqbaline mudadii uu jiray MW Farmajo oo aysan marnaba si cad uga hor iman khaldaadkisii, sida dakii lagu laayey Baydhabo, dhibaatada ay Qatar dalka ku hayso, ruux aragaxisada la shaqeysta oo ay og yihiin inuu ammaanka dalka isaga jiheeyo oo ay ka aamusan yihiin, wan ala aaminsan yahay inay wax ka qaban kareen, waxayna dad badan ayaa is weydiinaya maxaa dan ah oo ugu jira inay Somaliya hagaagto waana su’aan u baahan inay si ficil ah uga jawaabto bulshada caalamka.
Hadda waxaa ka hor muuqda khaldaadka kala ah:
Shabaab oo Xamar canshuur toos uga qaata, iyadoo ay dalka joogaan ciidan 20 kun iyo dheeraad ah, iyo ciidanka Somalida lacago canshuur looga soo qaado dalalkooda ayaana lagu kabaa.
Dalka Qatar oo ay Golaha ammaanka ay ahay d inay geeyaan kana joojiyaan aragagixisada uu ku hubeynayo Somaliya maadaama Fahad Yaasiin uu yahay nin labada dhinacba lacagaha loo soo marsiiyo.
Iyo tan hadda ugu daran oo hadda taagan taas oo ah in Fahad iyo Farmajo ay soo sameysteen gudiyadii doorashada u dhici lahaa, kuwaas oo ka kooban saraakiil Nabadsugidda ah, ehelo iyo qaraabada Fahad iyo Farmajo.
Dhinaca kale waxaa Iyana dorkooda uu maqan yahay Mucaaridka dhabta ah ee dadka matala iyagoo ka cabsanaya:
Inay dadka kiciyaan oo shacbiga arimaha gacmahooda ku fuliyaan, kuna leh haddii la buslahada la kiciyo sahal looma joojin karo, walow ay tani run ka muuqato.
In ay isku dhacaan Beesha caalamka oo ay u arkaan inay aad ugu dhowdahay Villada iyo Xaruunta NISA.
Isku soo duub shacabiga Somaliyeed ha ogaadaano in xataa beesha caalamka ay la safan yihiin Farmajo iyo Fahad oo aysan wax kasta oo ay sameeyaan waxba ka qaban doonin. Sidaas darted aqoonyahanka, culimada, Saxafadda iyo guud ahaan shacbiga ha ogaadaano dhibka runta oo la geli doono haddii Doorashada sidaan lagu galo.
SMC waxay talo ku soo jeedineysaa;
Labada guddi ee uu Fahad soo dhistay waa in la kala diraa oo guddiyo cusub la sameeyaa.
Waa in guddiyada loo qeybsadaa si sax ah sida ; Dowladda, Dowlad Goboleedyada, Mucaaridka iyo Bulshada Rayidka waa sidii lagu galay doorashadii 2016, beesha caalamkana la sii yaa korjoogtey dhab ah.
In Fahad iyo Farmajo lagu khasbaa in doorashada ay noqoto mid daah furan oo ay cid waliba arki karto sida loo maamulay iyo cidda sida xaqa ah ku soo baxday.
Previous articleMaamulkii Gobolka Tigray-ga oo gabi ahaanba la kala diray
Next articleItoobiya oo sheegtay inay qabatay Somali ka qeyb qaadaneysay dagaalka degaanka Tigreega